Telefishinka Universal iyo kaalintiisa isku dirka qabiillada Soomaalida ~ Degelka af Soomaaliga/ Somali Language Blog
Posted by Liibaan Axmad at 14:40
Waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay in ad hawada ku soo laabataan, waxaan u bartay oo an waliba u boggay sida diiran ee ad af Soomaaliga u tixgalisaan oo ad u barbaarisaan. Runtii, waa wax kuligeen na wadasaaran in af Soomaaliga la hormariyaa, la kobciyaa, la barbaariyaa, la saxaa, laga dhiggaa waxyaalaha ugu horeeya ee dadku xushmeeyaan. Waxaad haysaan hawl wax ku'ool ah oo u faa'iidaynaysa dad badan oo Soomaali ah oo an anigu an ka mid ahay. Waxaan dhigan jiray Hoose Dhexe Dhamme Yaasiin Cartan ee degmada Madiina oo waxaan ku han-weynaa in an galo Dugsida Sare ee Baarbe ee isla degmada Madiino. Nasiib-darro, dagaal baa dhacay.
Universal TV wuxuu doorbidday innuu dadka isku diro sida ay warbaahinta reer Galbeedku isugu diraan dadka kala aaminsan fikrahada kala ah qunyar socodka iyo xagjirka (liberal and conservatism) haddii an taas tusaale ahaan u qaadan karno. Marka waa mawduuc lacag iyo dhaqaale lagu soo hirgalinayo maaddaama aysan jirin cidkale oo kharash ku bixisaa iddaacaddahaas.